Abenzi Nabahlinzeki Abasebenza Ngokulula - Ifektri yaseChina Elawulwa Ngokushintsha Okulula
I-ES420-26P-POE ingumkhiqizo wokushintshwa we-PoE Ethernet ophethwe yiGigabit owenziwe yi-DCN, unikezela ngamachweba angama-24/10/100 / 1000Mbps RJ45 namabili weGigabit SFP, itheku ngalinye lisekela umsebenzi we-MDI / MDIX othomathikhi, futhi lingafinyelela ukudluliselwa kwejubane. Zonke izimbobo ezingama-24 zisekela umsebenzi we-PoE ohambisana ne-IEEE 802.3at ejwayelekile futhi emuva iyahambisana ne-802.3af. I-ES420-26P-POE ingasetshenziswa njengemishini yokuthola amandla, futhi ingathola ngokuzenzakalela futhi ikhombe idivayisi enikwe amandla ehlangabezana ne-standard ne-supply p ...
ES420-10P-POE L2 Ukulawulwa okulula kwe-PoE switch
I-ES420-10P-POE ingahlinzeka ngo-8 * 10/100 / 1000M auto MDI / MDIX function kanye ne-2 * SFP port engabona ukudluliselwa kwejubane. Ishintshela ukuphathwa kwenethiwekhi ye-Gigabit Layer 2 ephelele eyenzelwe ukuthuthukisa izidingo zenethiwekhi yokufinyelela ephezulu ye-Gigabit, njenge-WIFI AP, ikhamera ye-IP, ifoni ye-IP nezinye izinhlobo zemishini. Inezimbobo ezi-8 ezigcwele zeGigabit RJ45, futhi inganikeza isu eliphelele njengeQoS, imisebenzi ecebile ye-VLAN nokuphathwa okulula nokugcinwa, zonke izici m ...